Batshale izimali eziphambili ezivela ecolombia - Eziphambili izimali
Umbono WeBhayibheli. OWAYENGUMPETHA we- SA junior welterweight, uSamuel Malinga, ukhala ngokungoqa kophromotha osekuholele ekutheni alahlekelwe yithuba lokulwela izicoco ezinkulu emhlabeni.
UMalinga, osekuyophela unyaka wesibili agcina ukungena eringini, uthe okushabalalise ikusasa lakhe ngabahleli bezimpi abamadolonzima. KUCHWAZE inkundla kwasukuma wonke umuntu ngesikhathi kungena iqembu elicula ngaphandle kwezinsimbi, iThe Soil, eBat Centre ngoLwesihlanu ebusuku emcimbini wokugubha inyanga yamalungelo abantu.
Izithombe Ezingcolile Zobulili— Ingabe Ziwukuzilibazisa Okungenangozi? Batshale izimali eziphambili ezivela ecolombia.
Isikhathi Samanje Sibiza Inguquko Endleleni Esibhala Ngayo By Nkosikhona Duma on in News Kulesonto eledlule, ngike ngavakashela umcimbi obizwa ngokuthi i- “. LAPHO abavubukuli bangenkathi yeNdlovukazi uVictoria beqala ukuvubukula amanxiwa asendulo asePompeii, abakuthola kwabashaqisa kakhulu. Thembela KuJehova, ‘ UNkulunkulu Wenduduzo Yonke’ “ Makadunyiswe uNkulunkulu noYise weNkosi yethu uJesu Kristu, uYise wesihe noNkulunkulu wenduduzo yonke. Nikeza izizathu ezintathu ngokubona kwakho ezivimbela abantu abamhlophe ngokuvamile ukungalufundi ulimi lwase- Afrika bese/ noma ezibangela abantu abansundu ukuthi bafunde isiNgisi noma isiBhunu.
2 izikronike 7: 14 zul59 bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke, bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Lyrics to ' Bathembe Igazi Lemvana' by Andile KaMajola.
2 Uma amagama okubolekwa afakwa olimini lwase- Afrika, ukulandelana kwemisindo kumele kuguquke.
Isibonakaliso sokuhweba kwangaphambili mahhala